E gosipụtara usoro nhazi UTM na Google Maps - Geofumadas
Julaị, 2012 Cartografia
O yighị ka ọ bụ, ma akụ nke PlexScape Web Services mere ndokwa Gbanwee nhazi ma lee ha na Google Maps Ọ bụ mmemme na-akpali akpali iji ghọta otú usoro nhazi nke mpaghara dị iche iche nke ụwa si arụ ọrụ.
Maka nke a, a na-ahọrọ ya site na panel nke na-achịkwa Systems egosiputa, mba ahụ na usoro dị iche iche na-arụkọ ọrụ na Datum Systems na-egosi na ọrụ ejikọtawo na mpaghara ndị na-emetụta. Na ịpị na iko na-eto eto, ị nwere ike ịhụ geometry adia na map dị ka e gosiri na ụfọdụ nke eji Brazil.
Enwere m ohere a iji chịkọta ndị nwere ike ịmasị ihe anyị na-ekwu, ọ bụ ezie na e nwere maka mba ndị ọzọ na ọbụna ụfọdụ na-emetụta mpaghara dịka Europe, South America, wdg.
Họrọ Malal 1914
American 1969 South America
Na-emepụta ihe ndị dị na South America 1956
United States Maka mba abụọ a, e nwere usoro ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ala ọ bụla, ma e wezụga usoro usoro mpaghara
NAD27 (Nkọwa 1976)
Maka usoro ndị a nile, na mpaghara dịgasị iche iche ị nwere ike iji anya nke uche hụ nhazi na Google Earth na mpaghara mpaghara na mpaghara. E nwekwara ozi site n'aka ha, na ọ bụrụ na otu usoro adịghị, ha na-etinye ya na ya ma ọ bụrụ na a kọọrọ ha.
Gaa na ibe
Previous Post«Previous View na Google Maps UTM nrụtụ, na iji Ọ BỤLA! ọzọ ahazi usoro
Next Post Nke Sayensị na Teknụzụ nke Ozi Geographic… na Community nke ndị ọrụ gvSIG na HondurasNext »
2 Azịza ya na "Usoro Nchịkọta UTM gosipụtara na Google Maps"
Google na-eji WGS84
Vivian Fernandez kwuru, sị:
Ndewo ọma abalị m chọrọ ịma ihe bụ nhazi usoro m nwere ike iji kọwaa ụfọdụ data m nwere nke Panama na Google Earth na kmz, ha nọ na WGS 84, o doro anya na m ga-eji Nad27 mana mgbe m na-agbanwe ozi ọ na-ekwu na o nweghị nkọwapụta akọwapụtara Usoro nhazi, n'aka nke ọzọ ma ọ bụrụ na m agwa gị ịkọwa ya, ọ 'gbanwere' ya, mana atụghị anya ịkọ, kedu ihe m ga-eme? Daalụ maka ịzaghachi